Muuri News Network » War Deg Deg Ah: Itoobiya Oo Amar Duldhigtay Maamulka Somaliland iyo …
War Deg Deg Ah: Itoobiya Oo Amar Duldhigtay Maamulka Somaliland iyo …
Wararka naga soo gaaraya magaalooyinka Hargeysa Garoowe ayaa sheegaya in dawladda Itoobiya ee deriska ah Soomaaliya ay ku amartay maamulada Puntland iyo Somaliland in aan marnaba la qaadi Karin wax dagaal ah, ayna qolo kasta ku laabto saldhigyadii ay ka yimaadeen.
Saraakiil katirsan madaxtooyada labada dhinac ayaa u sheegay Muurinews Press in ay wada hadalo dawladdu la yeelatay Madaxda labada maamul, laguna qanciyey in ay ka baxaan goobaha cusub ee ay soo galeen.
Wakiilka dawladda Itoobiya u jooga Hargeysa ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, waxayna ka wada hadleen sidda ay suuragalka u tahay in uu ciidamadiisa kala baxo goobaha cusub.
Kulankan ka dhacay Madaxtooyada Hargeysa ayaa la sheegay in uu Madaxweynaha Somaliland goortii hore diiday dalabka Addis Ababa, uuna cadeeyey in aysan aqbaleyn oo ay doonayaan in ay joogaan ciidamadiisu goobta ay hadda kusugan yihiin.
Muuse Biixi ayaa sheegay in aysan jirin wax deegaan cusub ah oo ay tageen, balse goobta ay joogaan ay kamid tahay dhulka kuqoran Dastuurka Somaliland ee ay leeyihiin.
Sidaas oo kale Ergayga Itoobiya u jooga Garoowe oo dadaaladan qeybta Puntland horkacayey ayaa la kulmay Madaxda ugu sareysa Puntland, wuxuuna soo jeediyey talada Itoobiya ee ah in aan waxba dagaal ah la qaadin.
Ergaygan ayaa ku guuleystay in dhinaca Puntland laga dajiyo xaaladda, laguna soo celiyo sidda caadiga ah, waxaana muuqata in hadda labada dhinacba ay aqbaleen talaabadan la gaaray.